Ndị na-emepụta anụ ajị ajị anụ na-eche na - China China nwere ajị anụ ajị anụ, ụlọ ọrụ
Handcraft nwere nwamba n'ụlọ akwụkwọ
Ihe kpatara nkwanye you maara ihe kpatara nwamba gị ji maa mma ma maa mma? N'ihi na ha niile gụrụ akwụkwọ! Ihe ị na-ahụ na "Handiwork" taa bụ otu ụlọ akwụkwọ cat usoro dị ka nwa pusi gị. Ekike ejiri aka mee ka pusi ọ bụla ị nwere pụrụ iche! Bịa, chọta onye gị na pusi!
Nnọọ ajị Cygba ígwè anụmanụ ịchọ mma
Ihe kpatara nkwanye recommend na-echeta ihe nkiri katuunu "Zootopia" nke kpochapụrụ ụwa na 2016? Chetụla n’echiche na ụmụ anụmanụ na-agba ịnyịnya ígwè dị ka anyị? Taa, anyị na-ewetara gị usoro ịnyịnya ibu anyị chere. Mazi elk mara mma, Mazi Chin Mazi Rhinoceros Mazi giraffe na obi di nwayo, Miss alpaca na enwe amamịghe adika ha nile no na otu igwe ochie ahu ka anyi kelee gi. Gịnị bụ ihe magburu onwe ya? Họrọ ngwaahịa kachasị mma nke oge a!
Ihe ịchọ mma beaver mara mma
Ihe kpatara nkwanye Beaver bụ nnukwu ụdị òké, nke ụmụ anụmanụ na-anọ na mmiri, bi na mpaghara ugwu na mpaghara oyi, nwere ike ibi n'okpuru ice. Ọ bụ naanị ụdị abụọ ka fọdụrụ n’ụwa: otu bụ beaver America, nke a na-ekesa na mgbago ugwu United States, Canada na Alaska, na nke ọzọ bụ biva bi na Eurasia, ugwu Asia na Europe. Taa, anyị nwere ike ikwu beavers atọ si Canada. Ha niile na-enwe mmasị iri azụ ma dị mma n'ịkụ azụ. Ndị ...
Mara mma chere atụrụ ịchọ mma
Ihe kpatara nkwanye ugwu Otu ezin’ulo nke ejiri aka mee nke nwere aji nwere aji bu ndi kacha ewu ewu n’ile anyi nile. Ha bu nna aturu, nne aturu, nwanne aturu na nwanne nne aturu. Ezumike ezinụlọ ahụ bụ mgbịrịgba ọla kọpa. Ihe nkpuru ahihia ndu bu ihe tinyekwara ekeresimesi. Ezinaụlọ atụrụ mara mma kwesịrị ịzụrụ ụlọ dị ka onyinye na ezumike ọ bụla
Orteddị ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ejiri mara mma ejiri nkịta mee
Ihe ịchọ mma, Declọ ihe ndozi, Mgbidi Art, Ihe ịchọ mma ekeresimesi, Ihe ndozi, Mgbidi Mgbidi,